HeersareMuxumed: Nacdasha Iyo Khatarteeda
Nacdashu waxay ka mid noqotay cayda ugu isticmaalka badan ee bulshadeenna ku dhex faaftay. Waxa aad arkaysaa ilmo yar oo ku hadaaqaya; “Hooyadaa nacallaa ku yaal amma aabbahaa nacallaa ku yaal.” Wuxuu dhaqankan qarriban ka bartay bulshada uu ku dhex nool yahay oo ah macallinka labaad ee wax bara. Waxa se layaab leh oo sida oo kale aad arkaysaa hooyooyin badan oo caruurtooda ku leh; “Nacallaa aabbahaa ku yaal.” Waxay nacdalaysaa waa saygeedii, iyada oo u sii maraysa ilmaha yar ee ay dhashay. Waxa kale oo aad arkaysaa dad isku leh; “Nacallaa waxa aad tahay ku yaal, nacallaa ku dhalay, nacallaa wasiirtaa ku yaal, nacallaa wixii iska kaa dhalay ku yaal, nacallaa meesh aad ka timi ku yaal iyo nacdasha ilaahay kugu soo degtay.”
Nebigeenna suubban ee Muxamed (NNKH) waxa ka sugnaatay in marka uu qofku wax nacdalo in nacdashaas albaabada samada iyo kuwa dhulka in la xidho. Dabadeedna ay dib ugu soo noqoto qofka, xoolaha amma xayawaanka la nacday oo haddii uu nacdashaa muddaystay way ku dhacday, haddii aanu se mutaysan waxay dib ugu soo noqotaa qofkii wax nacdalay. Halkaa waxa ka cad in aanay nacdashu meel madhan ku dhicin. Bal waxa aad xisaabisaan qof maalin kasta wax nacdalaya oo nacdaashii dib ugu soo noqonayso xaalkiisu sida uu noqonayo?
Nacdashu waa wax qatar ah oo wuxuu qofka la nacdalayaa amma ka nacdalaya ee ay dib ugu soo noqonaysaa mutaysanayaan in cadhada ilaahay ku dhacdo oo naxariista laga fogeeyo. Dhammaanteenna waxa aynu rajaynaynaa in aynu helno naxariista ilaahay kana badbaado cadhadiisa iyo ciqaabtiisaba.
Waxa kale oo nebigeenna suubban ee Muxamed (NNKH) xarrimay in xoolaha amma xayawaanka ma yeedhaanka ah la nacdalo.
Haddaba, aniga oo ka duulaya nacdasha iyo khatarteeda ba waxa aan isku dayay in aan soo uruuriyo qaar ka mid ah xadiisyada uu nebigeenna suubban ee Muxamed (NNKH) kaga hadlay nacdasha:
1- Saxaabiga Sayid binu Sabith ilaahay raalli ha ka ahaadee waxa uu Rasuulka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka soo weriyay; “in nacdalista qofka muuminka ahi ay ka dhigan tahay dilkiisa oo kale.”
2- Saxaabiga Abii Hurayra ilaahay raalli ha ka ahaadee waxa uu Rasuulka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka soo weriyay; “ Uma haboona qofka muuminka ah inuu ahaado mid wax nacdala.”
3- Saxaabiga Abii dar-daa ilaahay raalli ha ka ahaadee wuxuu Rasuulka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka soo weriyay in uu yidhi; “Ma noqon doonaan kuwa wax nacdalaa kuwo shafeeco-qaada iyo kuwo shahiidiin noqda maalinka qiyaamaha.”
4- Saxaabiga Samura Binu Jundub ilaahay raalli ha ka ahaadee waxa uu Rasuulka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka soo weriyay in uu yidhi; “Ha isku nacdalina nacdasha alle, cadhasiisa iyo Naarta.”
5- Saxaabiga Ibnu Mascuud ilaahay raalli ha ka ahaadee waxa uu Rasuulka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka soo weriyay in uu yidhi; “Muuminku ma aha mid dhaleecayn badan, nacdal badan, xumaan iyo dhac-dhac badan.”
6- Saxaabiga Abii dar-daa ilaahay ralli ha ka ahaadee waxa uu Rasuulka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka soo weriyay in uu yidhi; “Adoonku marka uu wax nacdalo waxa ay fuushaa nacdashaasi Samada, waxa laga xidhaa albaabada samada inta aanay gaadhin samada, ka dib waxa ay u soo laabaataa xagga dhulka waxaa laga xidhaa albaabada dhulka inta aanay soo gaadhin, ka dib waxa ay u kacdaa midig iyo bidix, dabadeedna ma hesho meel ay gasho kadibna waxa ay ku soo noqotaa kii la nacdalay xagiisa haddii uu muteystay waa ay ku dhacdaa, haddii kalena waxa ay ku soo noqotaa kii yidhi.”
7- Saxaabiga Cimraan Binu Xuseyn ilaahay raalli ha ka ahaadee waxa uu Rasuulka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka soo weriyay; “Xilli uu Rasuulku SCW ku dhex jirey safaradiisa mid ka mid ah oo ay gabadh ansaarta ka mid ahi saarneyd hasheeda ayaa waxa isku soo istaagtay hashii, ka dibana way nacdashay. Dabadeedna Rasuulka (SCW) ayaa maqley waxaanu yidhi 'ka qaata waxa idiin saaran iskagana taga hashaas waayo waa ay nacdalantahay'e.”
8- Saxaabiga Cali Binu Abii Daalib ilaahay raalli ha ka ahaadee waxa uu Rasuulka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka soo weriyay in uu yidhi; “ Ilaahay ha nacdalo qofka ilaah qeyrkii u gawraca, ilaahay ha nacdalo qofka labadiisa waalid nacdala, ilaahay ha nacdalo qofka beddela calaamadaha dhulka, ilaahay ha nacdalo qofka hooya (hoy siiya) midka diinta wax ku soo dara.”
Inta aynaan u gudbin xasiiska u danbeeya waxa aynu soo qaadanaynnaa aayadan sida guud u sheegaysaa cidda sida guud loo nacdalay: “nacdasha ilaahay ha ku dhacdo lunsaneyaasha (diinleyaasha)” suuratul Huud.
9- Waxa saxeexaynka ku sugan in uu Rasuulka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee laga soo weriyey in uu yidhi; “ Alle ha nacdalo gabadha timaheeda timo kale ku tidicda iyo ta tidicdaba, Alle ha nacdalo tuugga xadaya xabad beed ah, Alle ha nacdalo yuhuud maxaa yeelay waxay ka dhigteen qubuurihii anbiyadooda Masaajido, Alle ha nacdalo Ragga isu eekaysiinaya Dumarka iyo dumarka iyagu isu eekaysiiya ragga.”
Waxa mahad gaar leh dhalinyaradan oo ka qayb-qaaatay turjumaadda axaadiistan: Cabdixakiim Maxamuud Axmed, Mawliid Daahir Xirsi, Cabdibaasid Cabdillaahi Ismaaciil iyo Ismaaciil Yuusuf Cabdiraxmaan.
Waxaana aad axaadiistan ka helikartaanta: Kitaabta Riyaadu-saalixiinka, bogagga 441-443.
Posted by HeersareMuxumed at 1:10 AM